Arsenal ‘wali waxay hogaamineysaa loolanka loogu jiro Gabriel Magalhaes – Xidigaha
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay wali ku horreyso tartanka loogu jiro daafaca dhexe ee kooxda Lille Gabriel Magalhaes inkasta oo kooxo badan lala xiriirinayo xilli dambe.
Manchester United ayaa la sheegay inay wadahadalo la yeelatay wakiilka 22 jirkan wakiiladiisa oo ku aadan suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqi karo Old Trafford, halka Paris Saint-Germain iyo Manchester City ay sidoo kale xiiseynayaan .
Sida laga soo xigtay saxafiga reer talyaani ee Fabrizio Romano , United ayaa wadahadalo kula jirta wakiilada daafaca laakiin wali wadahadal lama aysan furin kooxda Lille oo la rumeysan yahay inay ku qiimeeyaan 22 milyan ginni ciyaaryahanka reer Brazil.
Dhanka kale, Romano ayaa sheeganaya in Arsenal ay weli madaxa ugu jirto safka xiddiga reer South America, in kasta oo ay tahay wali la arki karo in Gunners ay heshiis ka gaari karto khadka dhexe.
Gabriel, ayaa sidoo kale lala xiriiriyay inuu u wareegayo kooxda reer Talyaani ee Napoli , 34 kulan ayuu u saftay kooxdiisa Ligue 1 xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan lix Champions League.
Daafaca kooxda Lille Jose Fonte ayaa dhawaan ka dhawaajiyay in daafaca uu xiiseynayo inuu u dhaqaaqo England.
Be the first to comment on "Arsenal ‘wali waxay hogaamineysaa loolanka loogu jiro Gabriel Magalhaes"